सिड्नी । अस्ट्रेलियामा कार्यरत नेपाली मुलका मुटु सर्जन डा कुमुद धिताल यहाँको प्रतिष्ठित अवार्डका लागि मनोनित भएका छन् ।
मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको मुटु अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गरेर विश्वमा ख्याती कमाएका डाक्टर धिताल अष्ट्रेलियाको प्रतिष्ठित "प्राइड अफ अस्ट्रेलिया मेडल" अवार्डका लागि मनोनित भएका हुन् । अस्ट्रेलियाको नेपालीपत्रसँग कुरा गर्दै डा धितालले भने, ”अवार्डको लागि कसले नोमिनेसन गर्यो थाहा भएन । एकै पटक पत्रपत्रिकामा समाचार आएपछि मात्र थाहा पाए ।”
यो अवार्ड यहाँको सबैभन्दा ठूलो प्रकासन तथा आमसंचार संस्था न्युज कर्पोरेसन अस्ट्रेलियले स्थापना गरेको हो । समुदायका लागि विशेष योगदान तथा सफलता हासिल गर्ने ब्यक्तिहरुलाई प्रशंसा स्वरुप हरेक वर्ष यो अवार्ड प्रदान गरिन्छ ।
हालै सार्वजनिक ‘प्राइड अफ अष्ट्रेलिया’ अवार्डको मनोनयनमा डा. धितालको नाम पनि परेको समाचार यहाँका मुलप्रवाहका समाचार संस्थाहरुले पनि प्रथमिकताका साथ प्रकासन गरेका छन् । मुटुको सफल प्रत्यारोपण गरी मानिसको ज्यान जोगाएकाले डा. धिताल मनोनयनमा परेको डेली टेलिग्राफले जनाएको छ ।
सामान्यतया चिकित्सकले ब्रेन डेथ अर्थात् मस्तिष्क मृत्यु भइसकेका व्यक्तिको धड्कन चलिरहेको मुटु अर्को व्यक्तिमा प्रत्यारोपण गर्ने गर्छन् । तर, सेन्ट भिसेन्टका नेपाली डाक्टर धितालले चल्न छाडिसकेको मुटुलाई समेत चल्ने बनाएर २७ जनामा प्रत्यारोण गरिसकेका छन् ।
डा धितालका अनुसार अहिले यही प्रविधि अनुसार बेलायत र बेल्जियममा पनि मुटुको प्रत्यारोपण शुरु भएको छ ।